Wasiir-ku-xigeenka waxbarashada Puntland oo bed qaba, kadib dhaawac ka soo gaaray shil baabuur. – Radio Daljir
Wasiir-ku-xigeenka waxbarashada Puntland oo bed qaba, kadib dhaawac ka soo gaaray shil baabuur.
Garoowe, Sep 19- Agaasimaha guud ee isbitaalka dhexe ee Garowe Maxamed Jaamac Xirsi ayaa Radio Daljir maantay uga waramay xaallada dhaawacyo uu ku jiray W/kuxiggeenka wasaaradda waxbarashada Puntland mudane C/raxmaan Diiriye Carab.
Dadka dhaawaca uu soo gaaray ayaa maanta Isniin) waxa uu gaari kula qallibmay inta u dhaxaysa deegaanka Sin-u-jiif iyo Libaaxa oo ka tirsan gobolka Nuugaal. Agaasimuhu waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee wasiir-ku-xigeenku aad u wanaagsantahay oo ay dhakhaatiirtu isha ku hayaan isaga iyo saddex qof oo kale oo gaariga la saarnaa.
Sikastaba ha ahaate, agaasimuhu waxa uu ka dayriyay xaaladda nin ka mida raggaas oo uu sheegay in dhaawac culusi uu madax ka soo gaaray, balse isgana ay dhakhaatiirtu la tacaalayaan gargaarkiisa.
W/kuxiggeenka waxbarashada Puntland mudane C/raxmaan Diiriye Carab ayaa maalmihii ugu danbeeyay ku sugnaa magaalada Bosasso, waxaana wararku intaasi ku darayaan in gaari uu watay wasiirku uu ku xumaaday degmada Carmo ee gobolka Karkaar, dabadeedna uu shil ku galay gaari karo oo uu halkaa ka soo raacay.
Shilalka waddooyinka ayaa dad tira badan ku laaya waddada wayn ee isku xirta magaalooyinka waawayn ee Puntland, inkasta oo ay dhawaan warbxin ay soo saartay waaxda qaabilsan nabad-galyada waddooyinku ay sheegtay in si aad u muuqata ay hoos ugu dhaceen shilalkaasi. Sababta hoos u dhaca ayaa loo aaneeyay calaamadayn ay shirkadda Golis ee isgaarsiinta ka hirgalisay meelaha ugu khatarta badan ee waddada.
Daljir, Garowe http://daljir.com/